Fedora 34 na-ezube iji PipeWire maka ụda kama PulseAudio | Site na Linux
Emepụtara ndị mmepe Fedora nso nso a kedu maka ụdị nke ọzọ Fedora 34, nnukwu mgbanwe ndokwa na mmiri iyi niile site na PulseAudio na JACK ụda sava ka PipeWire.
Iji PipeWire -enye gị ohere na-enye ọkachamara audio nhazi ike Na ụdị desktọọpụ nke desktọọpụ, kpochapụ mpekere ma jikọọ akụrụngwa ọdịyo gị maka ngwa dị iche iche.
Ugbu a, Fedora Workstation jiri usoro ndabere PulseAudio mee ihe maka nhazi ụda, na ngwa na-eji ọbá akwụkwọ ndị ahịa emekọrịta ihe na usoro a, jikọta ma jikwaa iyi egwu. Professional audio nhazi na-eji Jack ụda nkesa na metụtara ahịa n'ọbá akwụkwọ.
Kama PulseAudio na JACK a na-atụ aro ka ị jiri ihe nkesa mgbasa ozi PipeWire ọgbọ na-abịa na ntanetị nke na-emekọrịta ihe niile ga-eme ka ndị ahịa PulseAudio na JACK niile dị na ngwa na ngwa na-agba ọsọ na Flatpak
Maka ndị ahịa meworo okenye na-eji ALSA dị larịị API, a ga-etinye mgbakwunye ALSA nke ga-aga iyi iyi ọdịyo ozugbo na PipeWire. All PulseAudio na JACK based applications will be able to run on PipeWire, na-enweghị iji wụnye PulseAudio na Jack.
Nkwupụta a bụ iji dochie PemseAudio daemon na arụmọrụ dabara na PipeWire. Nke a pụtara na ndị ahịa niile dị ugbu a na-eji PulseAudio Client Library ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ dị ka na mbụ, yana ngwa ezigara dị ka Flatpak.
A na-edozi ọdịyo niile nke PRO site na Ọbá akwụkwọ ndị ahịa JACK, nke na-agwa sava Jack ozi. Nke a amaghị na ga-wụnye Jack ahịa ahịa nnọchi na-ekwu okwu ozugbo PipeWire. Ngwa niile dị na ngwa ọdịyo nke PRO dị ugbu a ga-arụ ọrụ na PipeWire.
Dị ka ihe ncheta, PipeWire Na-amụba ikike PulseAudio na vidiyo gụgharia, nhazi ụda ọdịyo dị ala, na usoro nchekwa ọhụrụ maka nnyefe na njikwa nnweta ngwaọrụ.
PipeWire na-enyekwa ikike ijikwa isi mmalite vidiyo dị ka ngwaọrụ ijide vidiyo, kamera weebụ ma ọ bụ ọdịnaya ihuenyo mmepụta ngwa. Ihe oru ngo a bu GNOME dikwa na ejirila ya na Fedora Linux maka ntule na ntanye ihuenyo na gburugburu Wayland.
PipeWire nwekwara ike ime dị ka ihe nkesa ụda ụda dị ala na arụmọrụ nke na-agwakọta ike nke PulseAudio na Jack, ọbụlagodi maka mkpa nke usoro nhazi ụda nke ọkachamara nke PulseAudio enweghị ike ikwu.
Ọzọkwa, PipeWire awade mma nche nlereanya Ọ na-eme ka ọfụma na njikwa ngwaọrụ akọwapụtara ohere ma na-eme ka ịgbanye ụda na vidiyo gaa na site na igbe dịpụrụ adịpụ.
Weghachi na playback ọdịyo na vidiyo nwere ntakịrị lag.
Real-oge video na audio nhazi ngwaọrụ.
Ulo oru otutu uzo na-enye ohere ikesa ihe n’etiti otutu ngwa. Njikwa na nhazi nke ihe osise eserese na-eme ya na usoro dị iche iche.
Graphicsdị nhazi ihe eserese nke ọtụtụ ntanetị na nkwado maka nzaghachi loops na mmelite eserese atomic.
A na-ahapụ ya ka jikọọ ndị ọkwọ ụgbọala ma n'ime ihe nkesa na ntanetị.
Uzo zuru oke maka ịnweta iyi vidiyo site na ịnyefe ndị na-akọwapụta faịlụ na ịnweta ụda site na nchekwa echekwara.
Ikike ịhazi data multimedia site na usoro ọ bụla.
Ọnụnọ nke ngwa mgbakwunye maka GStreamer iji mee ka njikọta dị mfe na ngwa ndị dị ugbu a.
Nkwado maka gburugburu sandbox na Flatpak.
Nkwado maka plugins na SPA (Simple Plugin API) usoro na ike ịmepụta plugins na-arụ ọrụ n'oge.
Usoro na-agbanwe agbanwe maka ịhazi usoro mgbasa ozi ejiri na ịbepụta nchekwa.
Iji otu usoro ndabere iji mee ihe ọdịyo na vidiyo. Ikike ịrụ ọrụ dị ka ihe nkesa na-ada ụda, ụlọ ọrụ iji nye vidiyo na ngwa (dịka ọmụmaatụ, maka gnome-shell screencast API), yana sava iji jikwaa nnweta ngwanrọ vidiyo vidiyo.
N'ikpeazụ, Kọmitii Na-ahụ Maka Injinia Fedora (FESCo) enyochabeghị, nke bụ ọrụ maka mmepe teknụzụ nke nkesa Fedora.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Fedora 34 na-ezube iji PipeWire maka ụda kama PulseAudio